China Aluzinc Corrugated Roofing Sheet Manufacturers and suppliers - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Mpempe akwụkwọ > Akwụkwọ Aluzinc Corrugated Roofing
Akwụkwọ Aluzinc Corrugated Roofing Ndị nrụpụta
Mpempe akwụkwọ mkpuchi ụlọ Aluzinc bụ mpempe akwụkwọ galvanized nwere oyi n'ụdị n'ụdị ebili mmiri dị iche iche. Aluzinc corrugated roofing sheet dabara maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke obodo, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ pụrụ iche, na nnukwu ụlọ na-ewu nchara. Mbadamba ụlọ ụlọ Aluzinc nwere mgbochi nchara na mgbochi nsị, ike dị elu, ịdị arọ dị mfe, ntinye dị mfe na enwere ike ịwepụ.
Witop Steel nwere ezigbo ntụkwasị obi na kwụsiri ike, ọnụahịa ezi uche dị na ya, oge nnyefe ngwa ngwa yana afọ 20 nke mbupụ ahụmịhe. Aluzinc corrugated roofing sheet ka akwadoro asambodo sistemụ njikwa mma ISO9001 yana asambodo sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi ISO14001.
A na -ebuga mpempe akwụkwọ ụlọ Aluzinc na Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Saudi Arabia, Iraq, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Ghana, Nigeria, South Africa, Congo, Brazil, Chile, Argentina, Peru na ihe karịrị mba na ngwaahịa 100 dị oke mma. ndị ahịa matara.
AZ150 Aluminom-Zinc Steel Aluzinc Corrugated Sheffet Sheet
Dị ka onye na-eduga AZ150 Aluminom-Zinc Steel Aluzinc Corrugated Roofing Sheet, Witop Steel na-agbaso ụkpụrụ ụkpụrụ siri ike iji mepụta mpempe akwụkwọ. Anyị na -ekwe nkwa na mpempe akwụkwọ mkpuchi ụlọ galvalume na -emezu ihe ndị ahịa chọrọ.
G550 Mpempe akwụkwọ kpuchiri ụlọ Aluzinc siri ike zuru ezu
Dị ka onye na -eduzi G550 Full Hard Aluzinc Corrugated Roofing Sheet, Witop Steel na -agbaso ụkpụrụ ịdị mma iji mepụta mpempe akwụkwọ. Anyị na -ekwe nkwa na mpempe akwụkwọ mkpuchi ụlọ galvalume na -emezu ihe ndị ahịa chọrọ.
Enwere ike ịhazi Akwụkwọ Aluzinc Corrugated Roofing emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama Akwụkwọ Aluzinc Corrugated Roofing. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu Akwụkwọ Aluzinc Corrugated Roofing. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!